Single bagged negariki dema - China Shandong Gongxian Gmengyuan
Single bagged dema negariki
Chili zvikamu & Rings
Chili Flakes / Akurirwa Chili
Tsanangudzo dema negariki Pashure pokunge Kutamiswa kuburikidza ounyanzvi hwokushandura zvinhu zvipenyu, dema negariki anogona kutsausa puroteni kupinda mhando 18 "acids amino" zvakakodzera kuti zuva womunhu, iyo inogona nokukurumidza kunyura pachitunha. Mu "Mugadziri Foods Program" Mushumo chirimwa zvokudya Kudzivirira kenza tsvakurudzo kuitwa USNCI sezvo pakati kudzidza, vanenge 48 mhando zvinobudirira zvokudya akarongwa, ramakagadzwa "negariki" ndiyo yechipiri hapana. Black negariki kunyanya rine 18 amino acids, Vita ...
Tsanangudzo dema negariki
Pashure pokunge Kutamiswa kuburikidza ounyanzvi hwokushandura zvinhu zvipenyu, dema negariki anogona kutsausa puroteni kupinda mhando 18 "acids amino" zvakakodzera kuti zuva womunhu, iyo inogona nokukurumidza kunyura pachitunha.
Mu "Mugadziri Foods Program" Mushumo chirimwa zvokudya Kudzivirira kenza tsvakurudzo kuitwa USNCI sezvo pakati kudzidza, vanenge 48 mhando zvinobudirira zvokudya akarongwa, ramakagadzwa "negariki" ndiyo yechipiri hapana.
Black negariki kunyanya rine 18 amino acids, mavhitaminzi (C, B, A), kuronda zvinhu (phosphorus, potassium, magnesium, yavaibvisa, calcium, calcium, nesilicon, aruminiyamu, zingi, selenium negermanium), sarufa yeimwe uye carbohydrate.
The nzwisisika basa matema negariki ndiyo 10 nguva kupfuura zvavo negariki; ayo antioxidant chinzvimbo 15 nguva kupfuura zvavo negariki.
Tian Koukuan, Japan wakakurumbira nyanzvi ezvinhu muchitokisi zvipenyu uye purofesa Mie University mu tsvakurudzo kwake kunoratidza kuti vatema negariki antioxidant vanokwanisa pakati dzakanakisisa anopfuura 300 siyana zvokudya antioxidant kushanda musiyano.
Mugumisiro dema negariki
Anti-anogumbura: The allicin ine nhema negariki ane antibacterial nomugumisiro.
Anti-bundu zvazviri: Black negariki anogona kuvhara kwetunhu "carcinogen" nitrosamines, uye tunodzivisa kukura masero kenza, uye kuuraya "kenza". "Ajoene" (diallyl thiosulfate) ndiyo mishonga kugadzikana uye ane chinokosha inhibitory chaizvo kukura siyana bundu masero, kunyanya neleukemia masero.
Kudzivisa cardiocerebrovascular chirwere: Chimwe remadunhu- kuti "negariki dema" wakapiwa nemasayendisiti ndiro "ropa zvitunha."
Kusimudzira bvudzi kukura: The yainge anonhuwirira pamusoro matema negariki anogona mhanyisa ropa riyerere mirayiridzo (sebaceous gland) uye bvudzi follicle aibuda, zvobatsira bvudzi kukura. Uyezve, zvinoita anewo kuchirapa nomugumisiro mhanza
Kugonesa zvirwere nerevane: Animal kuedza kuratidza kuti mafuta-soluble akadaro mafuta mu "negariki dema" anogona yekudyidzana nani phagocytic kushanda "macrophage" uye kuwedzera dziviriro yezvirwere mumuviri.
Kusimudzira ruzivo kukura: "dema gariki" zvinhu uye vhitamini B1 kwevanhu muviri anogona kubereka "gariki amine", uye "negariki amine" anogona kukurudzira zvokonzera vhitamini-B1 basa, chiwedzere carbohydrate oxidation kushanda uye zvinopa zvakakwana simba nokuda masero uropi kuramba zvakasimba mafungiro.
Nutritional Migumisiro: negariki ane refu muviri kukosha, uye vose zvokudya kunokosha womunhu muviri.
Kuti adzivirire chiropa: Black negariki ane simba chaizvo antioxidant basa. Rinogona tunodzivisa "lipid peroxidase" kukuvadzwa pamusoro chiropa sero Kamudzira marongerwo uye adzivirire chiropa.
Waidzora yomuropa yomuropa: Black negariki ine chinokosha chaizvo yomuropa kuzvidzora.
Black negariki anogona kuderedza ngozi kenza yeprostate: negermanium uye selenium, nesarufa yeimwe uye chicherwa zvinhu nhema negariki.
Unogona kutora zvidimbu 2-3 pazuva. First unogona peel they and and negariki uye kuchidya zvakananga. Black negariki anogonawo kugadzira madhishi uye tii, kana hwakakanyiwa nemigumisiro nani. Vanhu vane yakakwirira womukati kupisa vari varumbidzwa kutora rimwe nerimwe zuva. Vanhu vane neleukemia uye anoenderana zviratidzo coagulation zvirwere havasi ndakarumbidzwa kudya.
Black negariki ine siyana aitodada zvinhu uye mavhitaminzi kuti muviri zvinodiwa. It ungawedzera polyphenols uye zvinopa munhu basa pevhu, uye ane mhando 18 amino acids.
Vanhu vanotambura kana varwere vane: kupererwa, simbi kushaikwa uye calcium yakawanda kushaikwa; zvemwoyo uye cerebrovascular; hyp
Next: Bagged Multi - shizha reruva dema negariki
Aged gariki kusvina
Chinese Garlic Health Batsirwa
chinovira Box Black Garlic
Zvinobata Black Garlic-powder
Fresh White Garlic nokutengesa
Garlic kunze kwenyika
Natural yakaviriswa Black Garlic
Goverai Best Black Garlic kusvina
Red Ganda Garlic
Vietnam nokutengesa Black Garlic
Zvomumagaba dema hadiyo
Black hadiyo upfu
Black mashed hadiyo
Bagged Multi - shizha reruva dema negariki